ဂျေဒွန်ဆန်ချိုကို ဝေဖန်လိုက်ကာ မန်ယူနိုက်တက် vs လီဗာပူး ပွဲစဉ်ကို ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ ခရစ်ဘွိုင်း - xyznews.co
ဂျေဒွန်ဆန်ချိုကို ဝေဖန်လိုက်ကာ မန်ယူနိုက်တက် vs လီဗာပူး ပွဲစဉ်ကို ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ ခရစ်ဘွိုင်း
ခရစ်ဘွိုင်းဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက် ဘာတစ်ခုမှ လုပ်ပြထားခဲ့ခြင်း မရှိသေးတဲ့ ကစားသမားသစ် ဂျေဒွန်ဆန်ချိုကို ဝေဖန်ပြစ်တင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ယူရို ၂၀၂၀ မှာ ဒုတိယ နေရာ ရရှိခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဆန်ချိုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီက ဂျာမန် အင်အားကြီး ကလပ် ဒေါ့မွန်ကနေ ပေါင် ၇၃ သန်းနဲ့ ယူနိုက်တက်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် ကစားသမားဟာ ယူနိုက်တက်ကို ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ရုန်းကန် နေခဲ့ရပြီး ဒီရာသီ ယူနိုက်တက်ရဲ့ လိဂ်ပွဲစဉ် ၈ ပွဲမှာ ၃ ပွဲသာ ပွဲထွက်ခွင့် ရခဲ့ပြီး ခြေစွမ်းလည်း မပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သရဲနီတို့ဟာ ပြိုင်ပွဲစုံ နောက်ဆုံး ၈ ပွဲမှာ ၃ ပွဲသာ အနိုင်ရရှိထားခဲ့ပြီး အမှတ်ပေးဖလား မျှော်လင့်ချက် အတွက် ယနေ့ည ယာဂန်ကလော့ရဲ့ အသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာ အနိုင် ၃ မှတ် လိုအပ်နေပါတယ်။
စကော့တလန် တိုက်စစ်မှုးဟောင်း ဖြစ်သူ ဘွိုင်းက ယူနိုက်တက် အနေနဲ့ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ လီဗာပူးကို အနိုင်ရဖို့ အခွင့်အရေး ရှိနေတယ်လို့ ပြောလိုက်ပြီး ဆန်ချိုရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတော့ ဝေဖန်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဘွိုင်းက “ယူနိုက်တက်ရဲ့ front five ဟာ လီဗာပူးရဲ့ ခံစစ်ကို ချေမှုန်းနိုင်စွမ်း ရှိနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အကယ်၍ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ခံစစ်သာ ကောင်းကောင်း defend လုပ်နိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ဒီပွဲကို အနိုင်ရဖို့ အတွက် သူတို့မှာ အခွင့်အရေး ရှိနေမှာပါ။ ယူနိုက်တက်ရဲ့ တိုက်စစ် ကစားသမား အားလုံးဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ကစားသမားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်တို့ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီက ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေ အားလုံးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ရော်နယ်ဒိုဟာ အသင်းကို ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက် ကောင်းစွာ အကျိုးပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆန်ချို ကတော့ အသင်းကို ရောက်လာပေမယ့် ဘာတစ်ခုမှ စွမ်းဆောင်ပြထားတာမျိုး မရှိသေးပါဘူး။ သူ့အတွက် မန်ယူနိုက်တက်တို့ ဘယ်လောက် ပေးခဲ့ရသလဲ? ပေါင်သန်း ၇၀ လား ၈၀ လား? အတော်များတဲ့ ပိုက်ဆံပါပဲ။” လို့ ဝေဖန်သွားပါတယ်။
ဆန်ချိုဟာ ကလပ်အသင်းမှာ ခြေစွမ်းပြနိုင်ခြင်း မရှိပေမယ့်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့လက ဟန်ဂေရီ အန်ဒိုရာ တို့နဲ့ ပွဲစဉ်တွေ အတွက် အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်းမှာ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေ ခံခဲ့ရပြီး အင်္ဂလန် မန်နေဂျာ ဂါရက်ဆောက်ဂိတ်ဟာ သူ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရှင်းလင်းခဲ့ရပါသေးတယ်။
ဆောက်ဂိတ်က “အသင်းတစ်သင်းကို ပြောင်းရွေ့တဲ့ အခါ အထိုင်ကျဖို့ လုပ်ဆောင်ရတဲ့ ကာလဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဒီလိဂ်မှာ ဒါဟာ သေချာပေါက် လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်ကစားသမား မဆို ကျွန်တော်တို့လိဂ်မှာ ဘွန်ဒက်လီဂါမှာ လိုမျိုး သွင်းဂိုးတွေ ဂိုးဖန်တီးမှုတွေ များစွာ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက် ပါပဲ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်က စွမ်းဆောင်ရည်တွေ အတွက် သူ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်းမှာ ရွေးချယ်ခံရဖို့ အတွက် ထိုက်တန်မှု ရှိသလား? မရှိဘူးလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဆန်ချိုကို ကာလတစ်ခုကြာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားခဲ့တာပါ။ သူဟာ မြင့်မားတဲ့ level ကို ရောက်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
Previous Article ချဲလ်ဆီးတို့ နောဝှစ်ချ် ကို ဂိုးပြတ် ချေမှုန်းခဲ့ပြီးနောက် ၊ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ ဖြစ်မယ့် အသင်းကို ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ ခရစ် ဆပ်တန်
Next Article တိုက်စစ် ကစားသမားတွေ မဟုတ်ပေမယ့် ၊ ချဲလ်ဆီး ကြယ်ပွင့် ၂ဦး ဟာ ပြိုင်ဖက် ဂိုးပေါက် အတွက် အန္တရာယ် ရှိသူတွေ ဖြစ်ကြောင်း ချီးကျူးလိုက်တဲ့ တူချယ်